သငျသညျဝဘ်ပေါ်တွင်အရေးအသားရတဲ့ကြသည်နှင့်သင်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူပျော်စရာအချိန်နည်းနည်းရှိသည်ဖို့လိုတဲ့အခါ,ရုံနောက်တဖန်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မနေပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ရယူပြီးဝဘ်ပေါ်ရှိအပူဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့ပါ။ အခမဲ့အကောင်းဆုံးလိင်ဂိမ်းမှာကျနော်တို့အင်တာနက်အပေါငျးတို့သပူဂိမ်းများကိုစုဝေးစေနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူမည်သူမဆိုဖို့သူတို့ကိုအားလုံးဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏စုဆောင်းမှုသည်ပထမဦးဆုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းသဟဇာတဖြစ်သောဂိမ်းများသာဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ဖုန္း၊တက္ဘလက္စသည္တို႔ကိုပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္႔ မည္သည့္ကိရိယာတြင္မဆိုသင္၏ဂိမ္းမ်ားကိုကစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။, ဒါပေမယ့်ဂိမ်း၏ဤမျိုးဆက်သစ်လည်းဂိမ်းမှကြွလာသောအခါအပူဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးလှုပ်ရှားမှုသဘာဝကျကျစီးဆင်းစေသည်ရွေ့လျားမှုအင်ဂျင်နှစ်ဦးစလုံးအများကြီးပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျဖြစ်ကြပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်လိင်တွေ့ဆုံအတွက်ယူနိုင်ပါတယ်အများအပြားလုပ်ရပ်များ၏။ သင်လိုချင်သောသို့သော်သင်ဇာတ်ကောင်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ နှင့်စိတ်ကြိုက်၏ဒြပ်စင်သင်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုချင်ပါတယ်လျှင်အလိုတော်ထက်အများကြီးပိုပြည့်စုံလမ်းအတွက်ကျေနပ်စရာစိတ်ကူးယဉ်ဘို့ဤဂိမ်းစုံလင်သောစေမည်။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်ဤမျှလောက်များစွာသောမျိုးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အတူလာမယ့်ကြောင်းစုဆောင်းမှုဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏အမျိုးအစားစာရင်းအကြီးအကျယ်သည်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှရှိသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှဆိုက်ပေါ်တွင်ကွိဂိမ်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါအပေါငျးတို့ကွိမျအတှကျဂိမ်းများရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်လာကြယနေ့ညအခမဲ့လိင်ဂိမ်းကစားပျော်မွေ့။ ကျနော်တို့ပိုက်ဆံမတောင်းကြဘူး,ငါတို့သည်သင်တို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်အမည်ကိုမမေးကြဘူးနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဆုံးမဲ့ကြော်ငြာတွေကိုကြည့်ရှုစေမည်မဟုတ်. ကျနော်တို့သာသင် 18 သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်မေးကြည့်ပါ။
ကျနော်တို့ကဒီဆိုက်ပေါ်မှာလိင်ဂိမ်းများ၏ရိုင်းစုဆောင်းခြင်းရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်အင်တာနက်ကိုပူဇော်နိုင်သမျှသောမျိုးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ ကျနော်တို့ကဒီဆိုက်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့အခါကျနော်တို့ညစ်ညမ်းကမ္ဘာမှာအသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားများ၏စာရင်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏,ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကျနော်တို့ဂိမ်းတွေနဲ့တက်ကြောင်းစာရင်းဖြည့်စွက်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျရည်းစားနှင့်ရည်းစားကနေမှောင်မိုက်မုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍကစားစိတ်ကူးယဉ်တွေ့ကြုံခံစားလိင်ဂိမ်းကနေဒီနေရာမှာအရာအားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သမီးများ၊ညီအစ်မများနှင့်အမေများကိုသင်လုပ်နိုင်သည့်အတွက်ဝဘ်ပေါ်တွင်အပူဆုံး ၀ မ်းနည်းစရာဂိမ်းများရှိသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှဒီနေရာမှာလိင်တူဆက်ဆံခြင်းဂိမ်းများနှင့်လိင်တူချစ်သူမိသားစုလိင်ဂိမ်းများရှိသည်။, သငျသညျဆယ်ကျော်သက်သို့မဟုတ်ပျော့ကြိုက်လျှင်အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယ်အရာကိုခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား၊သင်သို့၊ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဇာတ်ကောင်ရှိသည်။ အပြင်,ဤဂိမ်းအချို့ဒီတော့ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကြိုက်မီနူးနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်,သင်ဂိမ်းအတွက်ဇာတ်ကောင်အဖြစ်ချင်မည်သူမဆိုပြန်ဖွင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်သင်တို့၏ခကျြခငျြးစိတ်ကူးယဉ်အသက်ရှင်နိုင်သည့်အတွက်ခကျြခငျြး၏ရိုင်းစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှဒိုမီနိုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးကျွန်နှင့်အတူလိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးလိင်တူချစ်သူဂိမ်းရှိသည်နှင့်ကျွန်အထီးနေသောအတွက်အမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးမှုဂိမ်းရှိသည်။, ဒီရက်တော်တော်လေးလူကြိုက်များကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါ်တစ်ဦးအမျိုးအစားသင်အမှန်တကယ်စွန့်စားမှုအတွက်ဇာတ်ကောင်အဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်အပျော်တမ်းစိတ်ကြိုက်နှင့်သံကြီးတယ်ပူပြင်းတဲ့အမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်အတူလိင်ရှိသည်နိုင်သည့်အတွက်ညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့ဤမျှလောက်ပိုပြီးရှိပါတယ်။ ယနေ့ညကစားခြင်းကိုစတင်ပါ!
ကျနော်တို့ဝဘ်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်လိမ့်မည်ဟုဆိုက်ရှိသည်။ သင်သည်မည်သည့်တိုးချဲ့မှုကိုမဆိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲအရာအားလုံးကိုပျော်မွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ကြောင်းအခမဲ့လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းဝှက်ထားသောလှည့်ကွက်တွေနဲ့လာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သင်သည်အခြားပလက်ဖောင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုမမေးပါသာမကသင်၏အိုင်ပီလိပ်စာကိုသိနိုင်သည့်စာဝှက်ထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ကျနော်တို့တောင်မှဆိုက်အပေါ်အချို့သောအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်ကိုဆက်ကပ်,သင်မှတ်ချက်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဘုတ်အဖွဲ့ပို့စ်များမှတဆင့်အခြားကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။, ဒီမှာအားလုံးယုတ်ဂိမ်းကစားအကြောင်းကိုပါပဲ။ ဒါဟာအားလုံးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းပါ!